Tag: abuur abuur | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 31, 2016 Arbacada, Agoosto 31, 2016 Douglas Karr
Textbroker wuxuu isku soo koobay shaxdan oo ah 5-ta tillaabood ee Istiraatiijiyadda Wax-ku-guuleysiga. 5ta aagood waa: Hantidhowrka iyo Falanqaynta Hormarinta Qeexida Himilada iyo Abuuritaanka Qorshaynta iyo La Socodka Seeding iyo Xakamaynta Haddii aan wax uun ku cidhiidhiyo, waxay noqon lahayd Dhiirrigelin. In kasta oo abuurka saamileyaashu ay waxtar leeyihiin, dhiirrigelinta waxyaabaha la bixiyo ee loo maro marinnada bulshada, xayeysiinta udhaxeysa, iyo bixinta-gujintu waa xeelado yaab leh Caadi ahaan, waxaan bilaabeynaa dallacsiinta ka dib markii aan ansaxino in waxa ku jira ay la jaan qaadayaan
Axad, Agoosto 14, 2016 Monday, August 15, 2016 Douglas Karr
Kordhinta gaadhista waxyaabahaaga waa muhiim. Haddii aad iskudayeyso inaad kobciso darajooyinkaaga dabiiciga ah adoo tixraacaya waxa kujira oo aad laxiriirto bogagga hay'adaha sare, haddii aad iskudayeyso inaad ballaariso gaarsiintaada bulsheed ee dhagaystayaasha khuseeya, ama haddii aad isku dayeyso inaad ku dhisto hay'ad warshad ah adoo ka helaya qof ka mid ah dadka saamaynta ku leh marketing suuq geynta saamaynta waa waajib. Suuqgeynta saamayntu waxay u kala jabtay laba qaybood oo lagama maarmaan ah Waa kuwama kuwa saamaynta leh
Marka aan dib u eegis ku sameyno mowduucyada Martech Zone si wax looga qoro, waxaan baareynaa caankooda iyo sidoo kale waxyaabaha horey loo daabacay. Haddii aan aaminsanahay inaan cusbooneysiin karno mowduuca oo aan ku dari karno faahfaahin dheeri ah oo fure u ah mawduuca - waxaan caadi ahaan qaadnaa hawsha qorista nafteena. Haddii aan aaminsanahay inaan sifiican ugu sharxi karno mawduuca sawirro, jaantusyo, shaashadaha shaashadda ama xitaa fiidiyow - sidoo kale waan qaadan doonnaa. A
Maalintii Talaadada, waxaan webinar cajiib ah la yeelanay mid ka mid ah shuraakadayada, Wordsmith for Marketing, oo ku saabsan 10 Xeeladaha Abuurista Mawduucyada ee Markuu Well Well Qallalayo. In kasta oo aan ku raaxeysanay sameynta kaftan iyo ciyaar yar oo daaha gadaashiisa ah, waxaa jiray fikrado waaweyn oo lagu wadaagay websaydhka. Halkan waxaa ah 7 waxyaabaha muhiimka ah ee lagala soo baxo webinar xeeladeena abuurista: 1. Waqti u qoondee hannaanka hal-abuurka - In kasta oo ay u muuqan karto wax fudud, a
The folks at Spundge wrote a blog post, 9 Steps to Abuurista Waxqabad ka kooban, oo leh "no-hype, buzzword free" infographic oo aan runtii jeclahay. Abuuritaanka nuxur tayo leh waa aasaaska istiraatiijiyad adag, oo kaa caawinaya inaad barato xirfaddan ayaa qayb ka ah himilada Spundge. Habka ugu wanaagsan ee loo soo saaro waxyaabaha ku jira waa dib-u-warshadaynta maqaallada, sawir-gacmeedka iyo hantida kale waxyaabo aad u soo jiidasho iyo soo jiidasho leh. Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa fursad aad ku haysato